सेयर बजारमा देखिएको सुधार
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सजेन्सबीच अहिले चलिरहेको शीतयुद्धको प्रभाव बजारमा परेको केही बजार विश्लेषकको ठहर छ ।
वर्तमान सरकार, अझ विशेष गरी अर्थमन्त्रीप्रति सेयर बजारका आमलगानीकर्ताहरूको सकारात्मक धारणा छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आमलगानीकर्ताहरूले बजार नियन्त्रणमुखी भनेर टिप्पणी गर्दै आएका छन् । विगत लामो समयदेखि बजार लगातार खस्कँदै गएको छ । सरकारले बजार सुधार्नका लागि पर्याप्त पहल नगरेको आरोप बजार विश्लेषकहरूले लगाउने गरेका छन् । बेलाबेलामा सार्जजनिक गरिने सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीति तथा निर्देशनहरूका विषयमा सही ढंगले लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित गराउन नसक्दा बजारमा अन्योल बढेको हो । गत आर्थिक वर्ष ०७५÷६६ भरिमा समग्र बजार पुँजीकरण ९.२२ प्रतिशतले बढेको भए पनि सेयर बजारमा मुख्य कारोबार हुने ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको बजार पुँजीकरण झन्डै ३६ प्रतिशतले घटेको नेपाल स्टक एक्जसेन्जको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७४ को अन्त्यमा ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको बजार पुँजीकरण १२ खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबर रहेकोमा ०७५÷७६ को अन्त्यमा यस्तो पुँजीकरण ७ खर्ब ९५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा झ¥यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सेयर बजारमा कुल ४२ लाख ६ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत छ । यिनै सेयरहरूको बजार मूल्यमा हुने उतारचढावले कुल बजार पुँजीकरण निर्धारण हुन्छ । लगातार सेयर मूल्य घट्दै जाँदा लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञानमा पनि त्यसले असर पार्ने भएकाले सरकारी अधिकारीहरूले दिने प्रत्येक अभिव्यक्ति र सार्वजनिक गर्ने हरेक निर्णयहरूको तात्विक असर पर्छ ।
पछिल्लो केही समययता जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा अत्यधिक गिरावट आइरहेको छ । विगतमा यस्ता कम्पनीहरूको सेयर मूल्यका बारेमा निकै बढाइचढाइ भएकै कारण जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा निकै ठूलो अपेक्षा रहेको विश्व बैंकमातहतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनापछि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने एउटा लहर नै सुरु भएको थियो । स्थानीय तहमा त सेयरको माग गर्दै आन्दोलनहरूसमेत भएका थिए । धितोपत्र बोर्डले नीति नै बनाएर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अनिवार्य सेयर छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधानको अहिले विशेषतः ठूला आयोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ पुगेको छ । यही आशले साना जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले आशा गरेरअनुरूप तिनले प्रतिफल दिन नसक्दा बजार मूल्यमा असर परेको हो ।
विगतका तुलनामा सेयर बजारको आधुनिकीकरणका लागि निकै प्रयासहरू भएका छन् । तर, सेयर प्रमाणीकरणका लागि फेरि धितोपत्र दलालकै कार्यालय पुग्नुपर्नेजस्ता अव्यावहारिक प्रावधानहरू लागू गरिएसँगै आधुनिकीकरणका प्रयास ओझेलमा परेका हुन् । सेयर बजारका झन्डै १६ लाख लगानीकर्ताहरूमध्ये ठूलो संख्यामा अझै पनि वित्तीय प्रतिवेदन र परिसूचकहरूको अध्ययन गरेरभन्दा बजारको बहावका भरमा लगानी गर्छन् भन्ने कुरा मंगलबार र बुधबारको नेप्से परिसूचक हेरे पुग्छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सेयर बजारमा लगानीका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको अभिव्यक्ति दिएपछि बजार परिसूचक पुनः उकालो लागेका छन् । बजारमा सकारात्मक बहाव आउनका लागि यतिमात्र पर्याप्त भने छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सजेन्सबीच अहिले चलिरहेको शीतयुद्धको प्रभाव बजारमा परेको केही बजार विश्लेषकको ठहर छ । बोर्ड भनेको बजार नियामक हो, उसले गर्ने प्रत्येक निर्णयले बजारको गतिमा कुनै न कुनै प्रभाव परिरहेको हुन्छ । बजार नियामकले चाल्ने कदम हचुवाका भरमा, तत्कालीन लाभहानी हेरेर होइन, पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन स्थायित्व हुने भयो भनेमात्र खास अर्थ राख्ने भएकाले त्यसतर्फ विचार गरिनु आवश्यक छ ।